Gabôna - Wikipedia
I Gabôna dia firenena ao Afrika Afovoany, izay manana morontsiraka any amin' ny Ranomasimbe Atlantika, ka ny telo ampahefatra amin' ny velaran-taniny dia rakotra ala mikitroka. I Libreville no renivohiny. Mamaritra an' i Gabôna avy ao avaratra-andefana i Ginea Ekoatôrialy, ao avaratra i Kamerona, ao atsinanana sy ao atsimo ny Repoblikan' i Kôngô. Miankina tanteraka amin' ny solitany ny toekarenan' i Gabôna ka noho izany dia lalaovin' ny fiovaovan' ny vidin-tsolitany izany toekarena izany. Mirefy 267 667 km2 ny velaran-tanin’ i Gabôna.
Sarin-tanin' izao tontolo izao maneho ny toerana misy an' i Gabôna
1 Jeôgrafian' i Gabôna
1.1 Rano, vohon' ny tany, toetany ary zavamaniry
1.1.2 Vohon' ny tany
1.2 Ny mponina
1.2.1 Ny vahoaka gabôney
1.2.2 Ny habetsahan' ny mponina
1.2.3 Ny fari-piainan' ny mponina
1.3.1 Fandraisan' ny mponina anjara
1.3.2 Ny fambolena
1.3.3 Fitrandrahana hazo
1.3.4 Fitrandrahana harena an-kibon' ny tany
1.3.5 Orinasa vaventy
1.3.6 Ny sehatr' asa fahatelo
1.3.7 Ny fifanakalozana
1.3.9 Toekarena ianjadian' ny olana avy any ivelany
2 Ny kolontsaina ao Gabôna
2.1 Ny vahoaka ao Gabôna
2.1.1 Ny foko ao Gabôna
2.2 Ny fiteny ao Gabôna
2.2.1 Ny fiteny frantsay
2.3 Ny fampianarana
2.4 Ny fivavahana ao Gabôna
2.4.1 Ny fivavahan-drazana
2.4.2 Ny kristianisma
2.4.3 Ny silamo
2.4.4 Ny fivavahana sy fikambanana hafa
Jeôgrafian' i GabônaHanova
Rano, vohon' ny tany, toetany ary zavamaniryHanova
Ny renirano Ogooué dia teraka ao Kôngô, mikoriana manamorona ny fehiben-tany, ary mivarina any amin’ ny Ranomasimbe Atlantika ao Port-Gentil.
Vohon' ny tanyHanova
Vohon' ny tany ao Gabôna
Ao avaratra ireo tendrombohitra Cristal izay mahatratra 900 m sy ireo tendrombohitra Du Chaillu izay mahatratra 972 m ao atsimo. ireo antokon-tendrombohitra ireo dia sarahin' ny renirano Ogooué. Ireo tendrombohitra Cristal ireo dia mitohy any amin’ ny tampon’ ny tendrombohitra Mayombe. Ny tapany avaratra amin’ i Gabôna dia anjakan’ny tany lemaka sy ny havoana. Ny renirano Ogooué izay azo andehanana lakana hatrany N’Djolé ao amin’ ny fidirana ao amin’ io lemaka io dia mahazo rano avy amin’ ireo renorano madinika izay mipoitra avy ao amin’ny tangoron-tendrombohitra gabôney.
Toetanim-pehibe mafana sy mando ny toetanin’ i Gabôna. Miova kely ny mari-pana mandritra ny taona: 26 °C ny sala-maripana isan-taona, 21 °C ny sala-maripana any atsimo-adrefana (Port-Gentil, Lambaréné, Mouila, Tchibanga, Mayumba) fa 27° C kosa ny sala-maripana any amin' ny morontsiraka sy any afovoan-tany. Mety mahatratra 18° C ny farany ambany ary 36 °C ny farany ambnony. Mifandimby amin’ ny fizaran-taona maina roa (Mey-Septambra sy Desambra-Janoary) ny fozaran-taona mando (Febroary-Mey sy Septambra-Desambra). Mahatratra 2 515 mm ny salan-drotsakorana isan-taona ao Libreville renivohitra. Miova eo anelanelan' ny 1 500 mm (any avaratra-atsinanana sy ao amin' ireo faritry ny hivoka) sy 3 300 mm (any avaratra-andrefana) ny rotsak' orana ao Gabôna. Ny salan-kamandon' ny soson-drivotra dia eo amin' ny 85 % nefa mety mahatratra 100 % izany amin' ny fotoana mahabe orana.
Ny vahoaka gabôneyHanova
Tanàn-dehibe ao Gabôna
Na dia vitsy mponina aza i Gabôna dia ahitana vondrom-poko miisa 40 any ho any, ka isan’ izany ny Andoma (Andouma), ny Kôta (Kota), ny Bateke (Bateké), ny Koele (Kwele), ny Mpôgoe (Mpogwe) ary ny Fanga (Fang). Ny Fanga izay monina ao avaratra no betsaka indrindra (mahatratra 1/3n’ ny mponina). Anarivony eo ny isan’ ny Pigmea izay mponina voalohany tao amin’ ny faritra misy an’ i Gabôna.
Ny habetsahan' ny mponinaHanova
Tamin’ ny taona 2008 dia nahatratra 1 484 000 ny mponin’ i Gabôna. Firenena vitsy mponina i Gabôna izay manana hakotroka 5,8 mp/km2. Maro ireo mpiasa avy amin’ ny firenena hafa monina ao Gabôna (avy any Benîno, Borkina Fasô, Ginea Ekoatôrialy, Kamerona, Kôngô, Kôtidivoara, Maly, Nizeria, Senegaly). Ny mpiasa ambony ao amin’ ireo orinasa mpitrandraka solitany dia avy any Eorôpa, ka ny ankamaroan’ izany dia Frantsay.
Ny fari-piainan' ny mponinaHanova
Isan’ ireo manana fidiram-bola ambony indrindra isan’ olona manerana an’ i Afrika atsimon’ i Sahara i Gabôna noho ny havitsin’ ny mponina ao aminy sy ny vokatry ny fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany. Tsy mbola mandroso anefa ny fitsaboana sy ny fari-piainan’ ny mponina satria mbola ambony ny taham-pahafatesan’ ny zaza (53 ‰ tamin’ ny taona 2008) ary ambany ny salam-pahaveloman’ ny olona (53,5 taona tamin’ ny 2008).
Fandraisan' ny mponina anjaraHanova
Fitrandrahana harena an-kibon' ny tanyHanova
Manana harena an-kibon’ ny tany betsaka i Gabôna, indrindra ny solitany. Ahitana firamainty, manganezy, oraniôma, volafotsy ary vy koa ny ao amin’ io firenena io.
Ny famokarana solitany no loharanom-bolan’ i Gabôna. Na dia izany aza dia nizaka ny fitontonganan’ ny famokarana solitany io firenena io noho ny faharitan’ ny tahirin-tsolitany any any ambanin’ ny tany. Ny solitany dia hadina avy amin’ ny otri-tsolitany amorontsiraka sy ambany ranomasina an’ i de Mandji sy Rabi-Kounga. Ny orinasa fanadiovan-tsolitany dia miorina ao Port-Gentil sy ao Pointe-Clairette. Ny ankamaroan’ ny fitrandrahana ny otri-tsolitany any Gabôna dia navela hosahanin’ ny orinasa frantsay ELF, izay nakambana tao amin’ ny TotalFinaElf.
Vy, fôsfaty, volamena
Isan’ ny harena an-kibon’ny tany any Gabôna koa ny vy any Mekambo sy any Belinga any avaratra-atsinanana. Mamokatra oraniôma koa i Gabôna izay manana tahiry tsy mitsaha-mihena. Misy koa ny tahirina fôsfaty sy volamena voajanahary.
Ny sehatr' asa fahateloHanova
Ny farantsa CFA no vola ampiasain’ i Gabôna. Nihena anysasany ny sandan’ io vola io tamin’ ny taona 1994. Ny varotra ivelany dia mandroso sady ahazoana tombony. Ireto ny firenena manafatra entana amin’ i Gabôna: i Alemaina, i Britaina Lehibe, i Espaina, i Etazonia, i Frantsa, i Italia, i Japàna ary i Nederlandy.
Manana lalana mirefy 917 km i Gabôna ka ny 10,2 % amin’ izany dia voarakotra tara. Misy ny lalalana midadasika avy any avaratra mankany atsimo mampitohy an’ i Loubomo amin’ i Kôngô ary an’ i Douala amin’ i Kamerona. Talohan’ ny taona 1970 dia lalam-by tokana no nampitohy an’ i M’Bindfa amin’ i Kôngô ary ny lalam-by mampitohy an’ i Pointe-Noire amin’ i Brazzaville.
Nanomboka tamin’ ny taona 1974 ny fanamboarana ny lalala mamakivaky an’ i Gabôna (Transgabonais) izay mirefy 697 km. Nisy ampahany avy eo anelanelan’ i Owendo sy i Booué izay vita tamin’ ny taona 1982, ary ny fanitarana izany mankany Masuku (Franceville) ao atsimo-atsinanana dia natomboka tamin’ ny taona 1986. Misy koa ny fikasana hanamboatra ny lalam-by natao hitaterana ny aloram-by avy ao avaratra-atsinanana. I Owendo sy i Port-Gentil no seranan-tsambo lehibe ao Gabôna. Ny renirano Ogooué si ireo rano hafa mivarina ao aminy (Ivindo sy Ngounie) dia azo itondrana lakana.
Toekarena ianjadian' ny olana avy any ivelanyHanova
Ny kolontsaina ao GabônaHanova
Ny kolontsaina ao Gabôna dia fitambaran-tsinga mahasamihafa avy amin' ny kolontsaina nentim-paharazana sy ao koa ny kolontsaina nampidirina avy any ivelany.
Ny vahoaka ao GabônaHanova
Ny foko ao GabônaHanova
Ahitana vondrom-poko miisa manodidina ny 50 ny ao Gabôna ka isan' izany ny Fanga na Ekanga izay 32 %n' ny Gabôney, ny Mpôngoe (zana-pokon' ny Miene) izay mahatratra 15 %; ny Ôbamba na Mbede mahatratra 14 %; ary ny Pono izay mahatratra 12 %. Ao koa ny Gisira na Esira, ny Vily, ny Nzeby na Bazeby na Njeby, ny Bakôta na Kôta na Ikôta na Ba-Kôta, ny Vongo, ny Masangô na Masango, ny Teke, ny Miene, sns. Ny foko sasany dia tsy ahitana afa-tsy olona anjatony vitsy. Tsy hadinoina koa ireo foko pigmea.
Ny fiteny ao GabônaHanova
Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialy sy fiteny enti-mapianatra ao Gabôna. Misy ny fianakaviana izay miteny frantsay ao an-trano rehefa miresaka amin' ny ankizy. Misy koa ireo ray aman-dreny izay manery ny zanany hampiasa ny fiteny afrikana rehefa ao an-trano fa ny fiteny frantsay kosa rehefa any an-tsekoly.
Tsy maintsy mamonjy sekoly ny zaza gabôney 6 hatramin' ny 16 taona. Ny 8 %n' ny zaza moanatra ihany anefa no afaka mankeny amin' ny anjerimanontolo teo anelanelan' ny taona 1998 sy 1999. Manana ny Oniversiten' i Omar Bongo izay naorina tamin' ny taona 1970 i Gabôna. Tamin' ny taona 2000 dia nahatratra 70,8 % ny tahan' ny olona mahay mamaky teny sy manoratra.
Ny fivavahana ao GabônaHanova
Manaraka ny fivavahan-drazana animista ny 11 %n' ny Gabôney. Ny fivavahan' ny vahoaka Babôngô (fivavahana boity - bwiti) no miely indrindra amin' ny fivavahan-drazana ao Gabôna. Misy vahoaka hafa izay manafangaro ny fivavahana boity amin' ny animisma sy ny fampianarana kristianisma ka manome endrika vaovao ny fivavahana boity amin' izao fotoana izao. Ireo fivavaham-poko hafa iza manam-pifandraisana amin' ny tonto ara-panoharan' ny saron-tava sy ny mozika ary ny dihy dia hita ao Gabôna. Ireto avy izy ireo: ny Ndjembé, ny Ndjobi, ny Mouiri na Mwiri, ny Mvett, ny Byeri ary ny Ikokhou.
Manakaiky ny 79 %n' ny mponina ao Gabôna no kristiana ka ny 53 % amin' izany dia Katôlika ary ny sisa dia mitsinjara amin' ny Prôtestanta sy ny firehana hafa. Ny katôlisisma dia niorina tao Gabôna niaraka tamin' ny fanjanahan-tany pôrtogey tamin' ny taonjato faha-18, sady nitombo ka lasa maro anisa indrindra ao Gabôna tamin' ireo taona 1900. Tamin' ny fanombojahan' ny fanjanahan-tany frantsay dia tonga ny misiona avy any Paris teo anelanelan' ireo taona 1890 sy 1960. Tamin' ny fiantombohan' ny tenantenan' ny taonjato faha-20 no nitomboan' ny fivavahana ara-pilazantsara. Tamin' ny taona 2016 dia tafatsangana ara-panjakana ny Fangonana ôrtôdôksa.
Vitsy ny Miozolmana ao Gabôna, izay eo amin' ny 10 %n' ny mponina, izay manaraka ny firehana sonita. Na dia ny Kristiana aza no maro anisa dia nampidirin' i Omar Bongo ao amin' ny Fikambanam-piaraha-miasan' ny firenena silamo (anglisy: Organisation of Islamic Cooperation) tamin' ny taona 1974.
Ny fivavahana sy fikambanana hafaHanova
Hita ao Gabôna koa ny framasônery, izay ahitana mpikambana maro ao amin' ireo mpitondra ara-pôlitika, sy ny fihetsiketsehana Rose-Croix.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabôna&oldid=1040790"